Timbuktu: Taariikhda magaalo qani ahaan jirtay ee hadda ciidda dabooshay - Bulsho News
Xigashada Sawirka, Anthony Ham
Magaalada Arawan ee bartamaha saxaraha, oo guryo badan ay ciid dabooshay
Iyadoo ay qorraxdu sii dhacayso, kahor aadaanka salaadda Maqrib, Maxamed Cali wuxuu bilaabaa safarkiisa habeenkii ee uu ku dhex lugeynayo waddooyinka bacaadka ah ee Timbuktu oo ka tirsan Mali.
Waddada, waxay iska heleen saaxiibkiisa, haddana mid kale, wayna isla sii lugeyeen
Muddo aad u dheer, saaxiibbadan ayaa isa soo dhoweyn jiray waxayna iska wareysan jireen saaxiibbada iyo qoyska.
Saaxiibbadan ayaa ka gudbay waddooyinka Timbuktu, waxayna sii wateen socodkooda ilaa bannaanka dhanka galbeed ee magaalada, iyagoo ku lebisnaa dharka dhaqanka dadka gobolladaas.
Kaddib markii ay saaxiibbada ka baxeen magaalada, dhulka ayay fadhiisteen iyaga oo shaah karsanaya.
Sida intooda badan qowmiyadda Tuareg, reer-miyigan ku nool Saxaraha, Ag Muhammad Ali wuxuu ku dhashay saxaraha aan ka fogeyn magaalada Timbuktu.
Warqaddiisa dhalashada waxaa ku xusan inuu dhashay sanadkii 1970, balse waa sanad qiyaas ah, cidna ma taqaanno taariikhda saxda ah ee dhalashadiisa. Ag Muhammad Ali ayaa leh: “Waxaan u maleynayaa inaan dhashay xilligaas kahor.”
Ag Muhammed Ali, oo ku koray saxaraha, ayaa sheegay in halista keliya ee halkaasi ka jirtay ay tahay dabeyl ciid wadata oo meel fog ka imaaneysa.
Wuxuu leeyahay, “Maalin aan yaraa, waxaan biyo u raadinayay geeleyga, markii aan soo laabtayna, waxaa na haleeshay dabeyl, taas oo cirka madow ka dhigtay oo aan waxba ka arki waayay. Wax digniin ah ma aysan jirin. Muddo shan daqiiqo gudaheed ayay ku dhacday. Waxaan ku qasbanaaday inaan dhulka seexdo oo aan sugo ilaa ay dabeyshu ka istaagto. Saddex saacadood ayay socotay. Kaddibna guriga ayaan imid balse ma arkin aabbahay, oo u baxay si uu aniga ii raadiyo.”
Hajj Muhammad Ali ma uusan arkin magaalada ilaa markii uu soo weynaaday, waana magaalada uu ka dhigtay gurigiisa, wuxuuna leeyahay: “Ma rumeysan karo tirada nalalka.”
Timbuktu, magaalada busta badan, ee mar ahayd magaalada ganacsiga
Baahida nolol-maalmeedka ayaa ku kalliftay Ag Mohamed Ali inuu aado Timbuktu, hallkaas oo uu ka bilaabay shaqadiisa isagoo noqday hagaha dalxiisayaasha doonaya inay arkaan saxaraha.
Niyadda Ag Muhammad Ali waxaa weli ku taal xusuusta saxaraha xitaa inkastoo uu dhex joogay magaalada. Marka aysna jirin shaqo uu magaalada u tago, wuxuu aadaa saxaraha isagoo bilooyin ku qaata eegidda xiddigaha iyo inuu shaah la cabo saaxiibbada.
Haddii uu is arko inuu ku qasban yahay inuu magaalada joogo, Ag Muhammed Ali wuxuu sugaa fursad uu habeenkii ku aadi karo bannaanka magaalada isagoo raadinaya saxaraha.
Ag Muhammed Ali wuxuu ahaa hage dalxiisayaasha ah. Waa nin weyn oo si xiiso leh u sheekeeya, xitaa markii uu u sheekeynayo saaxiibbadiis.
“Wiilasheyda waxay ku dhasheen saxaraha, sida caadada ah, waxaana ku nool nahay Timbuktu, waaxana doonayaa inay iskuul aadaan, balse ma doonayo inay sideyda oo kale noqdaan,” ayuu yiri.
Ag Muhammed Ali wuxuu ku hadlaa toddoba luqadood, inkastoo uusan wax akhrin karin qorinna karin.
Wuxuu yiri, “Maalin ayaan carruurteyda geyn doonaa saxaraha muddo dheer si ay si fiican ugu bartaan, oo aysan u lumin xiriirka ay la leeyihiin.”
Muddo toban sano gudaheed ah, Ag Muhammad Ali wuxuu awooday inuu quruxda gobolka tusiyo dalxiisayaasha, kuwaas oo xasaradaha iyo dagaallada ay ka hor istaageen inay tagaan gobolka Saaxil iyo Saxaraha.
Sheekooyinka Ag Muhammed Ali waxay ku qotomaan maalmihii wacnaa iyo waqtigii dalxiiska ee saxaraha. Xitaa maantada, Ag Muhammad Ali wuxuu rajeeyaa maalintaas xilliga ay dalxiisayaashu ku laaban doonaan gobolka.
Sanadihii dhexe, Timbuktu waxay xuddun ganacsi u ahayd Qaaradda Madow. Waxay sidoo kale ka mid ahayd magaalooyinka ugu qanisan adduunka ee xilligaas.
Ag Muhammad Ali wuxuu ku hadlaa toddoba luqadood inkastoo uusan wax akhrin karin qorinna karin
Cusbo, dahab, faan maroodi, iyo badeecoyin qaali ah oo Yurub ka yimid sida dharka dunta ka sameysan, barafuun ayaa ka soo gudbi jiray Timbuktu.
Ilaa 100,000 oo qof ayaa ku noolaa Timbuktu qarnigii 16-aad – in ka badan intii ku nooleyd London xilligaas.
Timbuktu mar waxay lahayd ku dhowaad labo boqol oo iskuul iyo jaamacado looga imaan jiray ilaa Granada iyo Baghdad. Magaalada waxaa lagu yaqiin maktabadaheeda jaban.
Dhammaan arrimahan, ayuu Ag Muhammad Ali qaab qurux badan uga sheekeeyaa dalxiisayaasha, wuxuu xitaa dalxiisayaashan u kaxeeyay maktabadaha qoyska wuxuuna tusiyay buugaag qaddiimi ah oo la qoray xilliyadii dahabka ahaa ee Timbuktu.
Buugaagtan waxaa ka mid ah, taariikhda Nabi Muxammad (nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee) kuwaas oo lagu qoray caleemo midabka dahabka ah leh.
Sheekooyinka uu uga sheekeeyo dalxiisayaasha Timbuktu, ayuu Ag Muhammed Ali wuxuu ku ogaaday in adduunku aad u xiiseynayo magaalada.
Wuxuu ka war helay isku dayada dalxiisayaashan ay isugu xiriirinayaan waxa ay ka maqleen magaalada berigii hore iyo hadda.
Ag Muhammed Ali ayaa dalxiisayaashan ku wehliya suuqyada si ay u arkaan geela ka yimid deegaanka Todni ee bartamaha saxaraha, isagoo sida jawaanno cusbo ah.
Kahor dabeysha, Ag Muhammad Ali wuxuu dalxiisayaasha kula cararaa meel ay ka galaan dabeylaha xooggan.
, Ag Mohamed Ali wuxuu saaxiibbo ka sameystay daafaha dunida, wuxuuna fursad u helay inuu u safro Yurub, halkaas uu uu la cajabay, sida ay dalxiisayaashu ula cajabaan magaaladiisa Timbuktu.
Ag Muhammed Ali wuxuu leeyahay: “Markii ugu horreysay ee aan imid Yurub, waxaan arkay biyo ku qulqulaya dhulka, waxaana is weydiiyay, ‘Allah, dadkaan! Way waalan yihiin!…Waa maxay waxay sida degdegga ah u soconaya ee aysan ku fekerin cid ku sugan saxaraha?!’ “
Wuxuu yiri, “Gudaha saxaraha, waxaynu heysannaa waqti badan, balse biyo ma laha xaggaas. Yurubna, biyo badan ayaa yaalla, balse waqti ma jiro.”
Balse iyadoo intaas oo masaafo u dhaxeyso isaga iyo saxaraha, Ag Muhammad Ali ayaa helay xiriir ka dhaxeeya: “Markii ugu horreysay ee aan arkay badda Barcelona, iskama celin karin inaan qeyliyo sababtoo ah waxay ahayd sidii saxaraha; ma lahayn dhammaad.”
Safarradiisa, wuxuu Ag Mohamed Ali ka bartay inay soo jiidasho leedahay Timbuktu, sababtoo ah Paris iyo Barcelona way cajabiyeen isaga, sida ay dad badanba u xiiseeyaan Timbuktu.
Mar, ayuu Ag Mohamed Ali aaday garoonka Barcelona, markaas ayuu ku qeyliyay: “Hal meel ayaa waxaa jooga dad ka badan kuwa Timbuktu.”
Marka ay dalxiisayaashu doonayaan inay arkaan dhul badan oo saxare ah, Ag Mohamed Ali ayaa geeya gobolka Arawan oo ku yaalla bartamaha saxaraha, waana magaalo ku hoos duugan ciidda ilaa 270 oo kiilo mitir ayayna u jirtaa Timbuktu.
Markaad aragto guryaha Arawan ee ay ciiddu qarisay waxaa kugu soo dhacaya markab la dhibtoonaya inuu quuso.
Toddobaadyada ugu dambeeya ee safarka, dabeyshu si xooggan ayay u ruxdaa magaalada, sida hirarka badda ee soo dhaafaya xeebta.
Waxaa jira haween biyo ay ceelka ka keeneen ku sida jirgaamo, haddii aysan taas jirinna uma aysan suurto gasheen inay ku noolaadaan halkaas oo tobnaan sano uusan roob ka di’in.
Inkastoo dagaallo ay ka qarxeen Afrika, waqooyiga iyo galbeedka, kuwaas oo dalxiisayaasha ka hor istaagaya inay booqdaan Timbuktu, Ag Mohamed Ali wuu diiday inuu ka baxo magaalada.
Wuxuu leeyahay, “Marka aan saxaraha joogo, waxaan dareemaa xorriyad. Ammaan. Wax cabsi ah niyaddeydu kuma jirto.”